Saraakiisha Ciidanka: "war Kheyre, naga xishoo oo Soomaalidana ka xishoo oo jooji beenta" - Muqdisho Online
Home Wararka Saraakiisha Ciidanka: “war Kheyre, naga xishoo oo Soomaalidana ka xishoo oo jooji...
Saraakiisha Ciidanka: “war Kheyre, naga xishoo oo Soomaalidana ka xishoo oo jooji beenta”
Hadalkii ka soo yeealay RW Kheyre xalay ee ahaa in ciidanka ay qaataan mushaar joogta hadalka mushaar la’aantana la sheegayana ay been tahay ayaa waxa saakay ka hor yimid qaar ka mida Saraakiisha Ciidanka.
Kulan saakay ka dhacay Xarunta Wasaaradda Gaashandhiga ayaa waxa weerar afka ah lagu qaaday RW Kheyre. Shirkaan oo uu shir go’doominayay Taliyaha Ciidanka Janaraal Dahir Adan Cilmi oo loo yaqaano Indha Qarshe ayaa lagu eedeeyay in uusan kulankii xalay u jawaabin beenta ka soo yeertay RW Kheyre. Mid ka mida Saraakiisha hogaanada ayaa yiri ” Taliye waad og yahay in aan mushaar la qaadanin oo ciidankii ay ka so baxayaan furumihii ay ku jireen, markaas ayaan dhagaystay hadalka beenta ahaa ee Xassan Kheyra ka sheegay madashii xalay”.
Taliye Indha Qarshe ayaa yiri “… anigu kama hadlin mushaar ciidan laakiin waxa aan u mahadceliyay ciidanka iyo difaaca ay dalka uga jiraan laakiin RW isaga ayaa hadalka runta ka fog sheegay”. Indha Qarsho ayaa ka cudur daartay in uusan u jawaabin Xassan Kheyre oo yiri “..hadii aan la qaadi lahaa hadalka Xassan Kheyre dowladnimada ayaa dhaawac soo gaari lahaa, cadowgeenana waa ay ka faa’iidaysan lahaayeen”.
Mid ka mid Saraakiihsa Ciidaanka oo goobjoog ka ahaa kulanka ayaa fartiin u diray Xassan Kheyre “.. War Mudane RW naga hishoo oo Soomaalida ka xishoo oo jooji beenta”. Waxa uu intaas ku daray ” Ciidanka ka ilaalada ka ah Villa Soomaaliya ee isaga ilaalisa mushaar ma qaadan dhowr bilood waana uu og yahay maxuu beenta u sheegayaa”.
Previous articleShiikh Shariif iyo Xassan Shiikh oo ka hadlay Dagaal beeled ka dhacay Hirshabelle iyo Galmudug!!
Next articleCiidamada Puntland oo howlgalo ka sameeyay Gaalkacyo!